UMere udalula okwenza iSwallows ingehlulwa kule sizini - Impempe
UMere udalula okwenza iSwallows ingehlulwa kule sizini
UVuyo Mere nozakwabo kwiSwallows FC, uLebogang "Cheeseboy" Mokoena bayizinsika zaleli qembu
Inkakha yeSwallows FC, uVuyo Mere iveze okuningi okwenza leli qembu elisuka kwiGladAfrica Championship lilokhu liqhubekile nokumangaza wonke umuntu esigabeni esikhulu.
Kuze kube yimanje kwiligi, iSwallows kanjalo nompetha besicoco okuyibona futhi abaqhwakele iMamelodi Sundowns abayazi induku yize isizini isifike maphakathi nedawo.
Kuyethusa lokhu ngoba iSwallows ayizange ingene emakethe ithenge inqwaba yabadlali kepha igcine abaningi ekhuphukele esigabeni esikhulu ngabo yase ithasisela lapha nalaphaya.
Nokho uMere obeyisivakashi ohlelweni lwezemidlalo kwiSAfm ngoLwesibili ntambama ugeqe amagula ngokwenzeka ngaphakathi kwiSwallows nokuyenza ilokhu iqhubekile nokumangaza.
“Kwathina sizimangazile ngoba uhlelo lwethu beluthi sizokwenza konke okusemandlani ukungadliwa yizembe ngesizini yethu yokuqala.
“Ngoba sekunje, ngingasho ngikhululeke ukuthi sisazoqhubeka nokumangaza ngoba konke kungenxa yokusondelana noMdali,” kusho uMere.
Lo mdlali okwisizini yakhe ka-20 ebholeni elikhokhelayo uthi akayicabangi indaba yeminyaka yakhe. Uneminyaka engu-36 ubudala.
“Ngingagcina ngifadalele uma ngingagxila eminyakeni yami yobudala. Okumqoka ukuthi ngisaqhubeka nokuziqeqesha ngendlela engigculisayo. Nakho konke lokhu kuyintando yoMdali,” usho kanje uMere oseyidlale wayiqeda yonke imidlalo yeSwallows kule sizini.
“Angikaze ngishintshwe (aqale ngaphandle kumbe afakwe umdlalo usuphakathi) ngisho kowodwa umdlalo. Ngisibanga nabafana abancane isikimu,” esho sakuchoma.
Ngendlela izinto ezisobala ngayo kwiSwallows kunabadlali ababa yingxenye yemihlangano yezikhulu eziphezulu.
“Konke lokhu kusenza sihluke kwamanye amaqembu. Kunethimba labadlali asebeqinile eliba yingxenye yemihlangano yebhodi bese siyabuya sibahlaziyele njengoba kunjalo okwenzekile ozakwethu,” kuchaza yena.
NgokukaMere kuningi okufanele kwenziwe ukuphucula izimpilo zabadlali ikakhulukazi uma kukhulunywa ngezezimali.
“Inkulu kakhulu le mali ukuthi ingawela kumfana omncane ongazi lutho ngemali ngoba iqiniso ukuthi asazi lutho ngayo.
“Uma ifika asiyilondolozi kodwa sigxumela ukuthenga izimoto ezinkulu nazo esingazi lutho ngazo. Ngiyathanda futhi nokuxwayisa ngabangani ababi.
“Kunesikhathi lapho ngike ngahlala khona ngingasebenzi. Bonke abangani bami sebengihlubukile. Kungikhombisile lokhu ukuthi bengithandwa uma nginemali. Nokuthi angizange ngizibulale kungenxa yokwesekwa wumndeni.
“Ngiyohlale njalo ngiwukweleta umndeni wami ngokuma nami njalo,” kusho lolu qweqwe lo mdlali oseke wagijima kwiBafana Bafana amahlandla ayishumi, Hellenic, Mamelodi Sundowns, Moroka Swallows, Platinum Stars nakwiBidvest Wits.
Previous Previous post: IChiefs ayivunyelwe ukubeka imiconjwana yayo eMorocco
Next Next post: Kubuhlungu kubasubathi ukumiswa kweComrades ‘ebalulekile’